Ugaye umshini wokwenza ikhofi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > Ugaye umshini wokwenza ikhofi
Ugaye umshini wokwenza ikhofi
I-Model No.: JH.CGE.002
I-Alumina blaamic blade for coffee maker yenziwe ngamaphesenti angu-95 aluminium oxide. Inzuzo enkulu kakhulu ye-alumina blaam blade inomsebenzi wesikhathi eside futhi ukuziphatha okuphansi kwe-thermal kunezinsimbi. Kuzokwenza umshini wekhofi ube nokuphila isikhathi eside.
Kungaletha ukunambitheka okuhlukile kwekhofi kunesimbi eyodwa, Ngaphandle kwalokho, kulula ukuthola. Abakhiqizi abaningi bekhofi bazama ukuyisebenzisa.
Ukubukwa kokusebenza komsebenzi
Ishidi elincane elincane le-alumina e-ceramic
I-Ceramic Blade Blade